AFG Caravelle Help azafady
fanontaniana AFG Caravelle Help azafady
2 taona 1 herinandro lasa izay - 2 taona 1 herinandro lasa izay #568 by calypso999
Aho taloha ho tia manidina ny AFG Caravelle in FS9.
No nahita ny toerana ary sada ny Caravelle. Mazava ho azy fa nisintona azy aho, ary nametraka tamin'ny FSX Steam izay manana maro sarotra fiaramanidina (PT Tu-154B2, DC-9, sns).
Fametrahana nandeha tsara ary tsy ela dia nanana mahazatra taloha Caravelle fa mavesatra tontonana.
Raha tsorina dia zava-manahirana roa anefa.
Milina tsy mety hanomboka hampandeha tsara. Dia hahatratra iray RPM ary rehefa manokatra ny fanombohan'ny valves ny revs mijanona fotsiny ao. No nanomboka.
Tsy afaka mahazo ny mikopaka hiasa. Tsy misy hetsika ny mikopaka hijerena ary tsy misy hetsika ny mikopaka ny tenany.
Aho, dia ho tena feno fankasitrahana ho an'ireo fanampiana / soso-kevitra.
Mahatsiaro Toy Ny Anaty panel / habetsahan'ny olana ho ahy. Olon-kafa ao amin'ny Steam manana izany traikefa please25?
Fanovana farany: 2 taona 1 herinandro lasa izay calypso999.
Fotoana mamorona pejy: 0.392 segondra